कम्पनी विश्लेषण | गृहपृष्ठ
Home लगानी कम्पनी विश्लेषण
युनिभर्सल पावर कम्पनी : कम्पनी विश्लेषण (सोमवार, २ असार २०७६)
युनिभर्सल पावर कम्पनीले आगामी आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट लगानीकर्तालाई ८ प्रतिशत लाभांश दिने प्रक्षेपण गरेको छ ।...
सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था : कम्पनी विश्लेषण (सोमवार, २ असार २०७६)
चालू आवको तेस्रो त्रैमासमा कम्पनीले रू. १ करोड ७९ लाख नाफा कमाएको छ । यो नाफा गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ३० प...
नेपाल सेवा लघुवित्त वित्तीय संस्था :कम्पनी विश्लेषण (सोमवार, २ असार २०७६)
कम्पनीले गत आवको नाफाबाट शेयरधनीलाई ५ दशमलव २ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको छ । चालू आवको चैत मसान्तसम्ममा कम...
नयाँ नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था : कम्पनी विश्लेषण (सोमवार, २ असार २०७६)
चालू आवको तेस्रो त्रैमासमा कम्पनीले रू. ८३ लाख २६ हजार नाफा कमाएको छ । यो नाफा गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ३५...
मुक्तिनाथ विकास बैंक : कम्पनी विश्लेषण (सोमवार, २ असार २०७६)
बैंकले २० प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न जेठ २१ गते सेबोनमा निवेदन दिएको छ । बैंकले ६१ लाख २९ हजार ५२० दशमल...
सिद्धार्थ बैंक : कम्पनी विश्लेषण (आइतवार, १ असार २०७६)
बैंकले १० दशमलव २५ प्रतिशत ब्याजदरमा २०८३ सालसम्मका लागि २५ लाख कित्ता ऋणपत्र जारी गर्न सेबोनमा निवेदन दिएको छ...
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक : कम्पनी विश्लेषण (आइतवार, १ असार २०७६)
चालू आवको चैत मसान्तसम्ममा बैंकले रू. २३ करोड १८ लाख नाफा कमाएको छ । सो अवधिमा बैंकको चुक्तापूँजी रू. २ अर्ब ६...
on: June 17, 2019 कम्पनी विश्लेषण, लगानी
युनिभर्सल पावर कम्पनीले आगामी आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट लगानीकर्तालाई ८ प्रतिशत लाभांश दिने प्रक्षेपण गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि मुनाफा आर्जन गरी लाभांश वितरण गर्ने योजना कम्पनीको छ । कम्...	बिस्तृतमा
चालू आवको तेस्रो त्रैमासमा कम्पनीले रू. १ करोड ७९ लाख नाफा कमाएको छ । यो नाफा गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ३० प्रतिशत बढी हो । सो अवधिमा कम्पनीले रू. १ करोड ३७ लाख नाफा कमाएको थियो । कम्पनीको...	बिस्तृतमा
कम्पनीले गत आवको नाफाबाट शेयरधनीलाई ५ दशमलव २ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको छ । चालू आवको चैत मसान्तसम्ममा कम्पनीले रू. १३ लाख ६ हजार नाफा कमाएको छ । गत आवको सोही अवधिको तुलनामा नाफा १४८ प्...	बिस्तृतमा
चालू आवको तेस्रो त्रैमासमा कम्पनीले रू. ८३ लाख २६ हजार नाफा कमाएको छ । यो नाफा गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ३५ गुणा बढी हो । सो अवधिमा कम्पनीले रू. २ लाख ३६ हजार नाफा कमाएको थियो । चालू आवको...	बिस्तृतमा
बैंकले २० प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न जेठ २१ गते सेबोनमा निवेदन दिएको छ । बैंकले ६१ लाख २९ हजार ५२० दशमलव २५ कित्ता हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न सेबोनमा निवेदन दिएको हो । विक्रीप्रबन्धकमा...	बिस्तृतमा
on: June 16, 2019 कम्पनी विश्लेषण, लगानी
बैंकले १० दशमलव २५ प्रतिशत ब्याजदरमा २०८३ सालसम्मका लागि २५ लाख कित्ता ऋणपत्र जारी गर्न सेबोनमा निवेदन दिएको छ । बैंकले नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डमा जेठ २० गते निवेदन दिएको हो । १५ ला...	बिस्तृतमा
चालू आवको चैत मसान्तसम्ममा बैंकले रू. २३ करोड १८ लाख नाफा कमाएको छ । सो अवधिमा बैंकको चुक्तापूँजी रू. २ अर्ब ६० करोड छ भने रिजर्भ कोषमा रू. ५८ करोड ३३ लाख छुट्याएको छ । चैत मसान्तसम्ममा बैंक...	बिस्तृतमा
महालक्ष्मी विकास बैंक: कम्पनी विश्लेषण (आइतवार, १ असार २०७६)
गत आवको नाफाबाट बैंकले आफ्ना शेयरधनीलाई ७ प्रतिशत बोनस शेयर र ८ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको छ । चालू आवको तेस्रो त्रैमाससम्ममा बैंकले रू. ३८ करोड ७९ लाख नाफा कमाएको छ । यो नाफा गत आवको सो...	बिस्तृतमा
लक्ष्मी बैंक : कम्पनी विश्लेषण (आइतवार, १ असार २०७६)
लक्ष्मी बैंकले १० प्रतिशत ब्याजदरमा २०८६ सालसम्मका लागि २० लाख कित्ता ऋणपत्र निष्कासन गर्न सेबोनमा निवेदन दिएको हो । बैंकले जेठ २१ गते ऋणपत्र जारी गर्न नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डमा नि...	बिस्तृतमा
कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक : कम्पनी विश्लेषण (आइतवार, १ असार २०७६)
चालू आवको चैत मसान्तसम्ममा बैंकले रू. ६६ लाख ५९ हजार नाफा कमाएको छ । यो नाफा गत आवको सोही अवधिको तुलनामा साढे ५ गुणा वृद्धि भएको हो । सो अवधिमा बैंकले रू. ११ लाख ९५ हजार नाफा कमाएको थियो । च...	बिस्तृतमा